Sida loo Beddelaan ID3 Tag?
Waa maxay sababta aad u rabto in aad si loogu badalo ID3 Tag?
Marka hore, aynu degnee u hesho in ay waxyaabaha aasaasiga u ah. Haddii aad u jecel muusiga, oo aad jeclaan lahayd a ID3 Tag habboon. Tani waa sababta oo ah waa tag ah ID3 kuu ogolaanaya in aad ku kaydsan wax warbixin ah sida artist horyaalka, album, track, iyo macluumaad kale oo ku saabsan song ee isla file. Diinta tag ID3 ah kaa caawin doona inaad xalliso aad heeso iyo wax ku ool ah ka badan oo la abuuro playlist cusub. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah faa'iidooyinka ka mid ah diinta tag ID3 ah.
- Guraan heeso ka dhaqso iyo si fudud
- baadhaa songs ah oo ka hawl yar ka badan abid
- Waxaad ogaan doontaa wax walba oo ku saabsan song ka mid file.
Sida loo badalo tag ID3 in Windows / Mac OS / Linux
Raadinta ee laptop ama computer si loogu badalo ID3 tags? Waxba ma ahan wixii OS aad u ordaan, waxaa jira hab fudud oo ID3 tags badalo. Halkan waxa aad ku arki 3 ka mid ah fursadaha ugu wanaagsan ee ID3 tags in Windows, Mac OS iyo Linux diinta.
1. Qaybta I. Saddex talinayo ID3 Tag Converter for Windows Kombiyuutaro.
2. Qaybta II. Saddex talinayo ID3 Tag Converter u Mac OS
3. Qaybta III. Saddex Converter talinayo u Linux.
Qaybta I. Saddex talinayo ID3 Tag Converter for Windows Kombiyuutaro.
1.Tag & Magaca
Short Description: Tag & magaca waa convertor caanka ah horumariyo Softpointer. Waxa ay taageertaa, ID3v1, ID3v2.2, ID3v2.3 iyo ID3v2.4 tags u mp3 files. Waxaa ka mid ah inta ugu badan ee qaabab file waaweyn sida wma, ASF, wmv, mp4, iyo qaar badan oo.
Sida loo badalo:
1. Fur software ah oo taga si faylka aad rabto in aad ka tag guddi bidix.
2. Xaqa guji galka aad rabto in aad ku darto tag oo guji Edit File Tag.
Suuqa kala editor 3. Tag furi doonaa oo waxaad ku dari kartaa warbixinta oo dhan lagama maarmaan ah in ay guji Save soo Gudbiyay.
Price: Laga soo bilaabo $ 32to $ 158 taas oo ku xidhan nooca
Short Description: Waa software tagger smart in maamushaa, abaabusha iyo nadiifin ururinta music aad. Waxaa synchronizes metadata la database-online.
1. Wuxuu furaa software iyo browser si folder aad file. Markaas guji songs Fix.
2. suuqa kala socda, hubi in aad geli faahfaahinta aasaasiga ah, kulanka, farshaxanka, Qaabka, Magacaabida File, iyo Save. Riix bilaabatay.
3. Ka dib markii ay ku bilowdeen, waxa ay si toos Wararka macluumaadka heesaha la marsiiyey ka gal.
3. MP3 Editor ID3 Tag
Short Description: software Tani waxay ka caawisaa meesha aad ku dari kartaa artist, sifayn, magaca, iwm Sobolsoft aad tags u maarayn horumarisa software this. Waxaad ku shuban kartaa file badan oo maamuli ay tag.
1. Ku dar MP3 files by dhirta fudud dooro file ka.
2. Afuufa waxaad arki doontaa column kala duwan ee artist, raad iwm Waxaa aad bedeli kartaa faahfaahsan.
3. Save itusi ama dhoofin faahfaahsan qaab XML iwm
Qaybta II. Saddex talinayo ID3 Tag Converter u Mac OS
1. iSkysoft Audio taariikhqorihii u Mac
Short Description: Iskysoft Audio taariikhqorihii u Mac waa barnaamij loo isticmaali karo sida editor tag ID3. Waxaad xulan kartaa heeso iyo edit tag ID3 ay. Waxaa si fiican u la dhexgeliyey Lugood.
1. In Lugood biiray maktabadda adigoo gujinaya Library.
2. Markaas xaq guji music aad rabto in la aqoonsado.
3. Waxaa si toos ah u tilmaamaysaa heesaha.
Short Description: Kid3 u ogolaanaya tag files kala duwan sida MP3, Vorbis, FLAC, MPC, MP4 / AAC, WMA, regelingen aan haysan si ay ku qor macluumaad ah ee qaab kasta.
1. Isticmaal guddi navigation oo fur faylka aad rabto in aad DEAD.
2. Marka aad gujisid faylka, waxaad arki doontaa macluumaadka horey u sii jiray.
3. Waxaad dooran kartaa in aad xaalkaa adigoo gujinaya edit ka dibna badbaadiyo macluumaadka. .
Short Description: TuneUp waa software weyn ee maaraynta collection of music iyo iyaga abaabulka. Waxaad hagaajin kartaa macluumaadka song, kuwaas oo khalad ah iyo sidoo kale tirtirto kuwan raadkaygay nuqul ah.
1. Just furo Lugood iyo u arkaan files ee Library.
2. Waxaa skaanka sameeyo si toos ah wixii macluumaad ah. Waxaad kala sooci karo files in seegi macluumaadka.
3. Just xaalkaa ka guddi ee midigta ah TuneUp.
Qaybta III. Saddex Converter talinayo u Linux.
Short Description: EasyTAG waa software utility u tags qaab sida MP3, MP2, Ogg Vorbis, FLAC, MusePack oo badan oo kale. Waxa uu isticmaalaa GTK + gui.
1. Fur app iyo tagaan folder ee aad files isticmaalaya guddi navigation ee bidix.
2. Dooro faylasha aad rabto tags ku noqonin.
3. On guddi saxda ah ku hoos ID3 Tag, bedelaan macluumaadka.
Short Description: Waa barnaamij ku maamushaa macluumaadka ku jira MP3 iyo Ogg Vorbis. Waxaad DEAD karo files mid mid ama samayn tagging ballaaran ee files mar in qaab kasta oo aad rabto.
1. Fur app iyo la isticmaalayo Directory shaqada, furo folder aad heeso.
2. Dooro faylasha aad rabto si ay u maareeyaan tag ah.
3. On xaq, hoos Edit Tag kaliya sameeyo tafatir loo baahan yahay in ay bedelaan xogta.
Short Description: Qalabkani waxa uu weyn u tag diinta. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan doontaa software Khamri aad Linux si uu ugu tartamo software this.
1. Ku rakib software Khamri ka hor tag ku rakibidda Mp3.
2. Fur software ka dooro file aad rabto in aad u maareeyaan.
3. Tag Options Mp3tag iyo samayn diinta lagama maarmaanka ah.
Raadinta in badan oo ku saabsan sida shaqo software garanaysaan? Waxaad booqan kartaa goobaha ay sameeysa wixii macluumaad dheeraad ah iyo faahfaahinta ku saabsan diinta Tag.
Sida loo Beddelaan MP4 in DV
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan ID3 Tag